प्रदेश ५ मा ४७ प्रतिशत रोपाइँ, वर्षौंदेखि बाँझो जमिनमा रोपियो धान
सोमवार, असार १५, २०७७ निरू गौतम 'निरा'
रुपन्देही–प्रदेश नं ५ मा यो वर्ष ४७ दशमलब ०५ प्रतिशत रोपाइँ गरिएको छ । कृषि विकास निर्देशनालयकाअनुसार समयमै वर्षा भएका कारण यो वर्ष प्रदेशका सबै जिल्लामा धमाधम रोपाइँ भइरहेको छ ।
यो वर्ष सबैभन्दा धेरै नवलपरासीमा ८४ दशमलब ०६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गुल्मीमा १९ दशमलब ६१ प्रतिशत रोपाइँ भएको कृषि विकास निर्देशनलायका सहायक सूचना अधिकृत अनिलकुमार कानु बनियाले जानकारी दिए ।
असार १५ सम्म रुपन्देहीमा ५६ दशमलब २९ प्रतिशत, पाल्पामा २१ दशमलब ९ प्रतिशत, अर्घाखाँचीमा २७ दशमलब ९२ प्रतिशत, कपिलवस्तुमा ४० प्रतिशत, दाङमा २६ दल ७६ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।
यसैगरी बाँकेमा ३७ दशमलब ९६ प्रतिशत, बर्दियामा ५४ दशमलब ८२ प्रतिशत, रुकुम (पूर्व)मा ७३ दशमलब ०५ प्रतिशत, प्युठानमा ९६ दशमलब १३ प्रतिशत र रोल्पा ५८ दशमलब ६३ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको सहायक सूचना अधिकृत बनियाले बताए ।
प्रदेशमा गतवर्ष तीन लाख एक हजार दुई सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकोमा १२ लाख ५३ हजार ८९ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले धान उत्पादन वृद्धि गर्न विभिन्न जिल्लालाई धान सुपर जोनका रुपमा घोषणा घोषणा गरी कार्यक्रम लागू गरेको छ ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आज १७ औं राष्ट्रिय धान दिवस एवम रोपाइँ महोत्सव मनाएको छ ।
वडा नं. ६ स्थित नगरपालिकाको नवनिर्मित भवन परिसरको खेतमा धान दिवस मनाइएको हो । दिवसको अवसरमा नगरपालिकाको आफ्नै झण्डै चार विगाहा खेतमा धान रोपाइँ गरिएको संयोजक एवं वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष सुखदेव न्यौपानेले जानकारी दिए ।
रोपाइँ महोत्सवमा नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरे, उप–प्रमुख जागेश्वरी चौधरीलगायतका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी, अगुवा किसान लगायतको सहभागिता थियो ।
रोपाइँको लागि वडागत रुपमा प्लट विभाजन गरिएकोमा जनप्रतिनिधिहरु बिहानैं खेतमा जुटेर उत्साहित रुपमा धान रोपाइँमा सहभागी भएका थिए ।
‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउने’ महिना मानिने असारको मध्यदिन तिलोत्तमाका जनप्रतिनिधिहरु धान रोपाइँमा जुटेका हुन् । नगरपालिकाले धानको सम्पूर्ण व्यवस्थापन आफै गर्नेगरी रोपाइँ गरेको हो । यसअघि सो खेतमा मकैं तथा गहुँ खेती गरिएको थियो । कार्यक्रममा नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले तिलोत्तमा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै कृषिमा व्यवसायिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
निर्वाहमुखी कृषिले किसानको जीवनस्तर उठ्न नसक्ने चर्चा गर्दै उनले तिलोत्तमाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । वडाध्यक्ष सुखदेव न्यौपानेले रोपाइँमा सहयोग पुर्याउने क्लव, कुलापानी समितिलगायत सबैप्रति आभार व्यक्त गरे ।
यसैबीच तिलोत्तमामा कयौं वर्षदेखि बाँझो रहेका जमिनमा यस वर्ष धान रोपाइँ भएको छ । नगरपालिकाले खेतीयोग्य बाँझो जमिनमा जग्गाधनी आफैले खेती नगरे वा नगराए सधियाँर वा अन्य व्यक्तिले खेती गर्न सक्ने निर्णय गरेपछि बाँझो रहने जग्गामा रोपाइँ भएको हो ।
कुल खेतीयोग्य जमिन ८ हजार ४४९ हेक्टरमध्ये ८४५ हेक्टर जग्गा बाँझो रहने गरेकोमा अहिले त्यसको झण्डै ६० प्रतिशतमा रोपाइँ भएको कृषि शाखाको तथ्यांक छ । यस वर्ष जेठ दोस्रो साताबाटैं तिलोत्तमामा रोपाइँ सुरु भएकोमा असार दोस्रो सातासम्म झण्डै ९० प्रतिशत खेतमा रोपाइँ सकिएको छ ।
लकडाउनको कारण नगरबासीहरु फुर्सदिला रहँदा धान रोपाइँ विगतका वर्षमा भन्दा यो वर्ष छिटो सकिने कृषि शाखा प्रमुख दोमलाल भुसालले जानकारी दिए । नगरपालिकाले कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावसँग जुध्न खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, असार १५, २०७७, ०३:१०:१३
काठमाडौं-कोभिड–१९ महामारीका कारण मुलुकको हवाई यातायात क्षेत्रको नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को वार्षिक आम्दानी ४३ प्रतिशतले घटेको छ। हवाई उडानको आयमा निर्भर हुने प्राधिकरणको कोभिड– १९ को प्रभावले मुख्य आम्दानी न्यून हुन गई कतिपय कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन नसकिएको प्राधिकरणलले जनाएको छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्राधिकरणको करिब रु चार अर्ब ५० करोड अर्थात् ४३ प्रतिशतले आम्दानी घटेको छ । वायुसेवाको आम्दानी करिब रु छ अर्बले घटेको जनाइएको छ। पुरा पढ्नुहोस्